I-china lip gloss vendor ileyibheli yabucala yomlomo weplumper gloss yenza eyakho imilebe yomlomo wokugcoba imilebe yokutshiza iflow mveliso kunye nabathengisi | Ubuhle beIris
I-lip gloss ethengisa iilebheli zabucala imilebe yeplumper gloss yenza eyakho imilebe yomlomo wokukhupha isilumkiso somlomo
Umlomo womlomo onomsoco kwisiphelo esimnyama. Ukuziva kulula, ukungabinamatheko. Umlomo uyanyibilikisa iivithamini kunye nebhotolo yeShea. Ukuqaqamba okungumlutha, ukunxiba okunesondlo, indawo yokugqibezela yokuchukumisa, tyhafisa imilebe yakho.
Le gloss lip glump lip gloss ine-shiny pearl luster, imibala etyebileyo, esetyenziswe kancinci, inokwenza imilebe yakho ibonakale ityebile kwaye ikhazimle, yenza imilebe emenyezelayo yesini, kwaye ube ngumbulali weqela.
Ifomula iqulethe iiVithamini kunye nebhotolo yeShea, inokuyithambisa imilebe yakho, yenze imilebe yakho ibe sempilweni, iperile icace kwaye ifumile, kwaye yenze imilomo yakho ikhazimle.
Ukwenza imilebe kubaluleke kakhulu kubafazi, kwaye imibala eyahlukileyo yemilebe yahlukile ebantwini. Ke ngoko, iimveliso zethu ezinobukhazikhazi bomlomo ezicocekileyo zilunge kakhulu njengezipho zosapho, izihlobo kunye neentombi. Le gloss lip glumping gloss ifumaneka kwimibala eyahlukeneyo, ke unokukhetha i-lip gloss efanelekileyo yempahla eyahlukeneyo kunye nezihlandlo.
Igama lomxholo Ukutyibilika komlomo
Umsebenzi Imilebe etyebileyo
4.Ukuqhaqhaza / Ukuqaqamba
Egqithileyo Ileyibhile yelatte engamanzi engamanzi ileyibheli yento oyenzayo yenza lipstick yakho kwiivenkile zokuthengisa ilinstst vegan
Okulandelayo: I-lip liner ileyibheli yabucala inkohlakalo mahala siko logo velvet creamy lip liner ipeni oem lip liner lip lipencil
ileyibhile yomlomo yabucala
Umthengisi we-gloss yomlomo
I-lip plumper gloss
Umlomo ogcwala umlomo
yenza umgca wakho womlomo